‘मेसीको खुट्टा जिससको उपहार’ | नेपाल इटाली डट कम
‘मेसीको खुट्टा जिससको उपहार’
मेसी जुनमा २३ वर्षका हुँदै छन् तथा म्याराडोनाले त्यो उमेरमा पाएको भन्दा बढी सफलता उनको नाममा लेखिसकिएको छ
बितेका केही सातायता बार्सिलोनाका लियोनल मेसीले संसारलाई आश्चर्यमा पार्ने खेल खेल्दै आएका छन् । उनकै खेलका कारण बार्सिलोनाले कतिपय खेल एकलौटी रूपमा जितेको छ ।
विश्वकप फुटबल मुखैमा आउँदा विश्वभरि एउटै प्रश्न गर्न थालिएको छ, के उनको लोभलाग्दो खेलले विश्वकपमा पनि निरन्तरता पाउला ? अनि के अर्जेन्टिनाको जर्सीले बार्सिलोनाको जर्सीझैँ सम्मान दिलाउला, उनलाई ? अब मेसीलाई उनको मुलुकका प्रशिक्षक तथा महान् फुटबल डियगो म्याराडोनासँग तुलनासमेत गर्न थालिएको छ ।
‘मसँग मेसीको तुलना हुन सक्छ तथा मेसीले तुलना गर्नलायक धेरै काम पनि गरेका छन्,’ म्याराडोना भन्छन्, ‘मेसीको खुट्टाको उपहार हो, अब उनी जिसससँग समेत खेल्न सक्छन् ।’ तैपनि, मेसीको भविष्य बनाउने जिम्मा पनि म्याराडोनाकै हातमा छ ।
मेसी जुनमा २३ वर्षका हुँदै छन् तथा म्याराडोनाले त्यो उमेरमा पाएकोभन्दा बढी सफलता उनको नाममा लेखिसकिएको छ । बार्सिलोनाबाट प्रकाशित हुने एउटा खेलपत्रिकाले एउटै उमेरमा म्याराडोना र मेसीको सफलताको तुलना गरेको छ । यो उमेरमा मेसीले म्याराडोनाभन्दा १२ खेल बढी खेलेका छन् भने राष्ट्रिय टोलीका लागि एक खेल बढी खेलेका छन् ।
म्याराडोनाले पहिलो श्रेणीको लिग खेल्दा उनी १६ वर्ष पुग्न मात्र १० दिन पछाडि थिए । तर, उनले मेसीले भन्दा पाको उमेरमा राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश पाए । मेसीले १६ वर्ष र एक सय ४५ दिनको हुँदा मुलुकका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए । साथै मेसीले विश्वकप पनि म्याराडोनाभन्दा कम उमेरमै खेलेका थिए । मेसीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय टोलीका लागि भने त्यति उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् भन्नु पनि गलत हो । २००५ मा हल्यान्डमा सम्पन्न युथ विश्वकपमा निणर्ायक खेल खेलेका थिए ।
बेइजिङमा अर्जेन्टिनाले महत्त्वपूर्ण स्वर्णपदक जित्दा मेसी पनि त्यसको सदस्य थिए । साथै २००७ को कोपा अमेरिका कपको फाइनलसम्म अर्जेन्टिनालाई डोर्‍याउने खेलाडी पनि उनी नै थिए ।
अर्जेन्टिनाले विश्वकपको अन्तिम चरणमा स्थान नबनाउँदासम्म म्याराडोनासँगै मेसीले पनि आलोचनाको सिकार हुनुपरेको थियो । साथै गत वर्ष बार्सिलोनाले केही कमजोर खेल्दा पनि मेसी नै त्यसको सिकार बन्थे । सानो उमेरदेखि नै विदेशबाट खेल्नु तथा आफ्नो मुलुकका क्लबका लागि नखेल्नु मेसीको कमजोरीका रूपमा लिइन्छ । साथै सोही कारण म्याराडोनाजस्ता खेलाडीको छायाबाट मुक्त हुन उनलाई कठिनाइ परेको पनि छ । तर, म्याराडोना भने त्यो कुरा स्विकार्दैनन् । ‘मेसी अहिले पनि मैले चाहेजस्तो खेल्दैनन्,’ म्याराडोना भन्छन्, ‘उनले धेरैपटक खराब पनि खेलेका छन्, जुन खेलमा उनी राम्रो गर्न सक्थे ।’
पेलेको नजरमा मेसी
ब्राजिलका फुटबल सम्राट् पेले पनि मेसीको खेलबाट मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । साथै उनी मेसीले आफूले झैँ हजार गोल गर्ने भविष्यवाणीसमेत गर्न पछिपरेका छैनन् । युरोपेली र फिफा वर्षको खेलाडी बनेका मेसी यो सिजनमा आकर्षक र्फममा छन्, जसले गर्दा ४४ क्लब खेलमा उनले ४० गोल गरिसकेका छन् तथा उनले आर्सनलविरुद्ध च्याम्पियन्स लिगमा चार गोलसमेत गरे । यसैले गर्दा उनलाई पेले र म्याराडोनाझैँ आक्रामक खेलाडीका रूपमा लिन थालिएको छ ।
तर, पेलेलाई मेसीको प्रतिभाप्रति केही शंका पनि छ तथा उनी मेसीले हजार गोल गरेपछि आफूसँग तुलना गर्न आग्रह पनि गर्छन् । ‘सधैँ नै कोही न कोहीसँग पेलेको तुलना गर्न खोजिन्छ,’ पेलेले एजेन्सीसँग भने, ‘म सधैँ आफ्ना अर्जेन्टिनी मित्रहरूसँग ठट्टा पनि गर्ने गर्छु, पहिला अर्जेन्टिनाकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी को हो भनेर त खोज भनेर । अनि जसले हजार गोल गर्छ, त्यसपछि कुरा गरौँला भन्छु ।’
‘मेसी राम्रा खेलाडी हुन् । उनले बार्सिलोनाका लागि धेरै राम्रो खेलेका छन्, तर उनले आफ्नो मुलुकका लागि भने राम्रो खेल्न सकेका छैनन्, हुन सक्छ अब विश्वकपमा उनको क्षमता हेर्न पाइएला ।’
« पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले रोजेका गाडी नपाउने
आइसल्यान्डमा ज्वालामुखी विस्फोटका कारण युरोपका विभिन्न हवाई उडान प्रभावित »